Waa maxay xaqiijinta aqoonsiga? : Dahabshiil Customer Portal
Solution home Somali FAQs Bilaabida Barnaamijka Dahabshiil
Waa maxay xaqiijinta aqoonsiga? Print
Modified on: Sat, 5 Jun, 2021 at 10:58 AM
Waxaan u baahan nahay inaan ogaano cidda aad tahay. Nooca shirkadayadu ee tahay darteed ayaa waxaa nalooga baahan yahay inaan si sharci ahaan hubinno macamiisheena dhmaantood.
Habka xaqiijinta waxaa ka mid ah bixinta ama nalawadaagida caddeyntaada cinwaanka meesha aad dagan tahay. Waxaan caadi ahaan isku daynaa inaan hubinno xaqiijinta aqoonsigaaga iyo ciwaankaaga si otomaatig ah, laakiin mararka qaarkood waxaan kaaga baahanahay inaad soo dirto caddeyn.
Haddii aan u baahanahay macluumaad dheeraad ah waan kula soo socodsiin doonnaa. Hadaanan ku weydiin, ooma baahnid inaad wax soo dirto. Dukumentiyada waad soo galin kartaa wakhti kasta adiga oo u sii gudbaya boggaaga astaanta.